Archdiocese of Mandalay blog: May 2015
မြန်မာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းကြီးသည် အောင်မြင်သွားခဲ့လေပြီ။ ပထမ အကြိမ် ရိုက်နှိပ်လိုက်သည့် မြန်မာစာအုပ်နှင့် တကွ ပုံနှိပ်စက်များ၊ မြန်မာ ပုံနှိပ်ခဲစလုံးများ၊ စာရေးကိရိယာ စက္ကူများ၊ အခြား ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို အလွန်ကြီးမားသော သေတ္တာ(၇)လုံးတွင် ထည့်၍ ဘားရ်နားဘိုက် သာသနာပြု (၃)ပါးကို မြန်မာပြည်သို့ စေလွှတ်ပေးခဲ့သည်။ (၂၈) ဘုန်းတော်ကြီး ကာရ်ပါးနီသည် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည် မကြွမြန်းတော့ပဲ။ အီတလီ ပြည်မှာတွင် ဆက်လက် သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့သည်။ ဆဌမမြောက် ပီဦးရဟန်းမင်းကြီးသည်လည်း အင်းဝ နေပြည်တော်ဘုရင် မင်းမြတ်အတွက် လက်ဆောင် ပဏ္ဍာများကို လည်းကောင်း၊ ရတနာဂျွန်းအတွက် လက်ဆောင်မွန်များကို လည်းကောင်း အဆိုပါ သာသနာပြုများနှင့် အတူ မြန်မာပြည်သို့ ထည့်သွင်းပါးလိုက်သည်။ အလားတူ သာသနာ ပြန့်ပွားရေးဌာနချုပ်မှ မြန်မာ ခဲစလုံး (၇၀၀၀၀)နှင့် လက်တင်ခဲစလုံး(၄၀၀၀၀)တို့ကို ထည့်ပေးလိုက်သည်။ ဆရာတော် ပယ်ရ်ကိုတို အနေဖြင့် မိမိ စိတ်တိုင်းကျ ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ခဲ့ရလေသည်။
မြန်မာပြည်သို့ ထွက်ခွာလာကြသော ဘားရ်နားဘိုက် (၃)ပါးတို့ မှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်ကြသည်။
၁။ ဘုန်းတော်ကြီး လူဝီဂျီ ဂရွန်ဒိုးနား Fr.Luigi Grondona
၂။ ဘုန်းတော်ကြီး ဂျွန်းမေရီ မာဇုခေးလီ Fr. John Mary Mazzu chelli
၃။ ဘုန်းတော်ကြီး ပါစကား ဖွန်တားဇီးယား Fr. Pascal Fontasia
ရှေးဦးဆုံး ဂျွန်းမေရီ မာဇုခေးလီ Fr. John Mary Mazzuchelli နှင့် ဘုန်းတော်ကြီး ပါစကား ဒွန်တားဇီးယား Fr. Pascal Fontasia တို့သည် ၁၇၇၆ ဦးပိုင်းတွင် အီတလီပြည်မှ ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ ဤတကြိမ်၌ မြန်မာပြည်သို့ ခန့်အပ်လိုက်သော ဘားရ်နားဘိုက် (၃)ပါးတို့သည် အတူတကွ ခရီးထွက်ရန် လိုလားခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ "ပိုတို အောရီရင့်" Porto Oriente သင်္ဘောကြီးမှ ကျန်ရှိနေသေးသော ဘုန်းတော်ကြီး လူဝီဂျီ ဂရွန်ဒိုးနားကို စောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အခြေအနေ မပေးသဖြင့် တကွဲတပြားစီ ထွက်လာခဲ့ကြရာ ဘုန်းတော်ကြီး ဂျွန်းမေရီ မာဇုခေးလီ Fr. John Mary Mazzu chelli နှင့် ဘုန်းတော်ကြီး ပါစကား ဖွန်တားဇီးယား Fr. Pascal Fontasia တို့သည် ၄င်းနှစ် စက်တင်ဘာလပိုင်းတွင် ပဲခူးသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး လူဝီဂျီ ဂ၇ွန်းဒိုးနားမှာမူ သင်္ဘောပျက်သဖြင့် ၁၇၇၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၃၀)ရက် နေ့ကျမှသာလျှင် မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
(၂၈) Storia del Cristianesimo nellmpero Barmano Luigi Gallo pp.109 Milano 1862
ဆရာတော် ပယ်ရ်ကိုတို ပျံလွန်တော်မူခြင်း
ဆရာတော် ပယ်ရ်ကိုတိုသည် အသစ်ရောက်ရှိလာခဲ့သော ဘားရ်နားဘိုက် သာသနာပြုတို့အား ၀မ်းပန်းတသာ ဆီးကြိုခဲ့ကြသည်။ မြန်မာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းကြီး ထမြောက် အောင်မြင်သွားသဖြင့် ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးတင် မဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုမူ မိမိ လိုအပ်တောင့်တသည့် အတိုင်း မြန်မာစာအုပ်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်တော့မည်ဟု ကြည်နူး ၀မ်းမြောက်နေတော့သည်။
ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို ရေးသား ပြုစုနေသော ကျမ်းမှာ မြန်မာ-လက်တင်-ပေါ်တူဂီ (၃) ဘာသာတွဲ အဘိဓာန်ကျမ်းကြီး ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် သာသနာ လုပ်ငန်းများနှင့် စာပေလုပ်ငန်းများ၌ အားတက်သရော လုပ်ဆောင်နေခိုက် ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့လာခဲ့သည်။ သွေးအားနည်းခြင်း နှလုံးအားနည်းခြင်း၊ ခြေများ ယောင်ယမ်းလာခြင်း၊စသဖြင့် ခံစားလာခဲ့ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ မိမိ ကျန်းမာရေးအတွက် ခေတ္တ အနားယူရန် အင်းဝနေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အင်းဝတွင် ကိုရင်ကြီး ဘယ်ရ်ဂွန်းဇီ၏ ဆေးဝါးကုသမှုကို ခံယူခဲ့သည်။ ရောဂါသက်သာမှု ပြန်လည် ရရှိသည်နှင့် မုံလှရွာသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။
လုပ်ငန်းခွင်၌ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း ကျန်းမာရေးသည် ယခင်ကကဲ့သို့ အခြေအနေ မပေးတော့ပဲ ရှိခဲ့သည်။ မိမိ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို သိရှိလာသည့်အတွက် နဘက်ရွာတွင် ကျေင်းထိုင်နေသော ဘုန်းတော်ကြီး မီကောနီအား မုံလှရွာသို့ လာစေပြီး သာသနာလုပ်ငန်းများကို လွဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး မီကောနီအား မုံလှရွာရှိ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းနှင့် အခြားသော သာသနာရေး ကိစ္စအ၀၀တို့ကို လက်ပြောင်း တာဝန်ယူစေပြီး ဆရာတော်သည် အင်းဝသို့ ကြွသွားခဲ့သည်။ မိမိ ရေးသားပြုစုနေသော (၃)ဘာသာတွဲ အဘိဓာန်ကျမ်းကြီးကို အင်းဝမှာပင် ဆက်လက် ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။ ၁၇၇၆-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့တွင် ဆရာတော်ခံစားရသော ရောဂါဝေဒနာမှာ ပိုမို ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ `
မယ်တော်သခင်မ အပြစ်မဲ့ သန္ဓေယူသောပွဲ အဖိတ်နေ့ ဖြစ်သည့်အလျောက် အာပတ်ဖြေခြင်း စက္ကရမင်တူးများကို ခံယူလျက် မိမိကိုယ်ကို ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် မယ်တော်ပွဲကို ကောင်းစွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကောင်းသော သေခြင်း ခံယူနိုင်ဘို့ မယ်တော်အား ဆုပန်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် အင်းဝမြို့ရှိ ခရစ်ယာန်သုဿန် သို့ အပန်းပြေ လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့သည်။ သုဿန်မှ အပြန်လမ်းတွင် မိမိနှင့် နှစ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာ ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့သော မ်ိတ်ဆွေကြီး ပြင်သစ် အမျိုးသား ပေတလုဒ် မိလဒ်အား ၀င်ရောက် တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်သည်။ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် ဗုဒ္ဓ္ဓဘာသာဝင် ပုဂ္ဂိ္ဂ္ဂ္ဂ္ဂ္ဂ္ဂ္ဂ္ဂုလ်တစ်ဦးနှင့် ဘာသာရေး ဆွေးနွေးရင်း စကားလက်ဆုံ ပြောခဲ့သေးသည်။ ၄င်း ညနေပိုင်း၌ ဆရာတော်သည် ညစာ မသုံးဆောင်နိုင်သဖြင့် အိပ်ရာသို့ စောစောဝင် နားယူခဲ့ရသည်။ ၁၇၇၆-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၁၂)ရက်၊ နံနက်ခင်းတွင် ဆရာတော်အိပ်ရာ မထသေးသဖြင့် အိပ်ခန်း အတွင်းဆောင်သို့ ၀င်ရောက် စစ်ဆေး ကြသောအခါ ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတိုသည် အိပ်ရာတွင်း၌ မိမိ ရေးသား ပြုစုနေသော (၃) ဘာသာတွဲ အဘိဓာန် ကျမ်းစာမူများကို လက်တွင်း၌ ကိုင်ထားလျက် အသက်တော် ချုပ်ငြိမ်းနေသည်ကို တွေ့ရှိကြရသည်။
ဆရာတော်သည် အသက်တော် ၄၉ နှစ်ရှိပြီး၊ မြန်မာပြည်တွင် ၁၅ နှစ် သာသနာ တာဝန်များကို ထမ်းရွက်လျက် သီတင်းသုံး နေထိုင်သွားခဲ့သည်။ မြန်မာပြည် သာသနာအတွက်နှင့် မြန်မာလူမျိုးများအတွက် အလွန် အရေးပါ၍ သမိုင်းတွင် မှတ်ကျောက်တင် ကျန်ရစ်သော လုပ်ငန်းကြီးများကို ထမ်းရွက်ပေးခဲ့သည်။ အထက်မြန်မာပြည်ရှိ သာသနာတော်ကို ပြန်လည် ထူထောင်ပေးခြင်း၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ ရဟန်းဘောင်သို့ တက်လှမ်းနိုင်သော လမ်းစကို တင်ဖေါက်လုပ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ခြင်း၊ ဘာသာရေး ကျမ်းဂန်စာအုပ်များကို ရေးသား ပြုစုခဲ့ခြင်း၊ မြန်မာအဘိဓာန်ကျမ်းကြီးကို ရေးသား ပြုစုပေးခဲ့ခြင်း၊ နောက်ဆုံး မြန်မာတိုင်းရင်းသားထု တစ်ရပ်လုံး၏ ကျေးဇူးရှင်အဖြစ် အမြော်အမြင် အလွန်ကြီးမားစွာဖြင့် မြန်မာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းကြီးကို တီထွင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေသည်။
အထက်မြန်မာပြည်ရှိ ကက်သလိခ် ဘာသာဝင်များ တက်ရောက်ပြီး၊ ရဟန်းတော်များ ခြံရံလျက် ဆရာတော်၏ ဈာပန အခမ်းအနားကို အင်းဝ နေပြည်တော်ရှိ ခရစ်ယာန်သုသာန်မှာပင် သင်္ဂြိုလ်ခဲ့ကြသည်။ ဆရာတော်၏ တပြည့်ရင်းသားဖြစ်ပြီး မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း ဖြစ်သော "ကုလား ဗိုလ်ဘွဲ့ရ" ပေတလုဒ်မိလဒ်သည် ဆရာတော်၏ ဈာပနအခမ်းအနား ကုန်ကျစရိတ် အားလုံးကို လှူဒါန်းခဲ့ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် တည်ဆောက် လှူဒါန်းသော ခရစ်ယာန်သုသာန်မှာပင် ဆရာတော်၏ ကြွင်းကျန်သော ရုပ်ကလပ်ကိုဂူသွင်းမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို ပျံလွန်တော်မူသော်လည်း ထာဝရဘုရားသခင်၏ သာသနာတော်သည် ဆက်လက် အဓွန့်ရှည် သွားလာရဦးမည်ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို၏ ရုံးခန်း၌ စာရွက် စာတမ်းများကို စစ်ဆေးပြုလုပ်နေသော ဘုန်းတော်ကြီး မီကောနီသည် လွန်ခဲ့သော (၈)နှစ်က ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို ရေးသားထားသည့် လှို့ဝှက် စာတမ်းတစ်စောင်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ စာတွင်းပါရှိသော အကြောင်းအရာမှာ မိမိ ပျံလွန်တော်မူခဲ့သော် မြန်မာပြည်ရှိ ကက်သလိခ်သာသနာတော်အား ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပေးရမည့် ပုဂ္ဂိ္ဂုလ်မှာ ဘုန်းတော်ကြီး ဂေရားဒို ကော်တင်းနိုးဗစ်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်အပ်ထားသည်ကိုတွေ့ ရှိရသည်။
ဆရာတော်၏ သေတမ်းစာအရ ဘုန်းတော်ကြီးဂေရားဒိုသည် သာသနာတော်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ရသည်။ သို့သော် မိမိကိုယ်တိုင်၌ကား ဆရာတော် အရိုက်အရာကို လက်ခံဘို့ရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး ဂေတားနိုမန်တေဂါးဇားအား ဆရာတော်အဖြစ် ရွှေးကောက်ပေးပါရန် ရောမမြို့၊ သာသနာပိုင် အကြီးအကဲတို့အား လျှောက်ထား တင်ပြခဲ့သည် (၂၉)။ သို့သော် သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဆဌမမြောက်ပီဦးမှ ပြန်ပေးစာတွင် ဘုန်းတော်ကြီး ဂေရားဒို ကော်တင်းနိုဗစ်အား မြန်မာပြည် ကက်သလိခ်သာသနာတော် အတွက် ဆရာတော်အဖြစ် ရွှေးချယ် တင်မြှောက်လိုက်ကြောင်း ပါရှိခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဘုန်းတော်ကြီးဂေရားဒိုသည် ဆရာတော် ဘိသိတ်ခံယူရန် အိန္ဒိယပြည် မာလိယပိုမြို့သို့ ကြွမြန်း သွားခဲ့လေသည်။
ဘုန်းတော်ကြီး ဂေရားဒို ကောတင်းနိုဗစ်သည် ၁၇၈၀ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် အိန္ဒိယပြည်၌ အင်းဝ၊ ပဲခူးသာသနာတော်ပိုင်အဖြစ် "ဆိုဇိုပိုလီတားနို" ဆရာတော်ဘွဲ့ (Bishop of Sozopolitano) ကို ခံယူ၍ ဆရာတော် ဘိသိတ်ခံယူခဲ့သည်။
(၂၉) (I) Letter of Rangoon.30 January 1777 Archives of Sacred Congregation for Propagation of Faith. Indie Orientali-Cina,raccolta 35,no .257.
(II) Letter of Rangoon.10 January 1778/Archives of Sacred Congregation for Propagation of Faith. Indie Orientali_Cina, raccolta 35,no.543
(III) Letter of Rangoon.25 .April 1779.Archives of Sacred Congregation for Propagation of Faith. Indie Orientali_Cina, raccolta 36,no.72
(၃၀) Renzo CARMIGANANL. La BIRMANIA Ralazione inedita del 1784. Del Missionario Barnabita GM MANTEGAZZA ROMA 1950. CF P.25
အိန္ဒိယပြည်မှအပြန် ခရီးတွင် ဆရာတော် ဂေရားဒို ကော်တင်းနိုးဗစ်သည် မိမိသာသနာနယ်မြေဖြစ်သော နီကိုးဗားကျွန်းစုများတွင် ၀င်ရောက် ကြည့်ရူခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဟိုင်းကြီးကျွန်းတွင် ကက်သလခ် ဘာသာဝင်များ တော်များများရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ရဟန်းဘုန်းတော်ကြီးများ ရှားပါးမှုကြောင့် သာသနာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ လစ်ဟင်းခဲ့ရသည်။ ဟိုင်းကြီးကျွန်းတွင် သီတင်းသုံး နေခိုက် ဆရာတော်သည် ဌက်ဖျားရောဂါ ရရှိခဲ့သည်။ ၄င်းရောဂါ ဖိစီးမှုဒဏ်နှင့်ပင် ဆရာတော် ဂေရားဒို သည် "နီဂါရီ" ကျွန်းကလေးပေါ်မှာတွင် ပျံလွန်တော်မူခဲု့သည်။ (၃၁) သို့ဖြစ်၍ မြန်မာပြည်အတွက် ရရှိလိုက်သော ဆရာတော်အသစ်ကား မိမိသာသနာလယ်ကွင်းပြင်သို့ ပြန်လည် မရောက်သေးမီမှာပင် လက်ခုလတ်၌ ဘုရားသခင်၏ သိမ်းပိုက်ခြင်းကို ခံသွားရလေတော့သည်။ (၃၁) အထက်ပါ အညွန်းအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်အမျိုးသားကြီး ပေတလုဒ် မီလဒ် (Chevalier Millard)
ပြင်သစ် အမျိုးသားကြီး ပေတလုဒ်မိလဒ်အကြောင်းကို ရှေ့ပိုင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ပေတလုဒ်သည် ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို၏ ချစ်ခင်ရင်းနှီးသော တပြည့်သားရင်းတဦး ဖြစ်သည်။ မိမိဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူခြင်းအတွက် ပေတလုဒ်သည် စိတ်အလွန် ထိခိုက်မိခဲ့သည်။ အလုပ် အားလပ်ချိန်များတွင် ပေတလုဒ်မိလဒ်အား ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို၏ သင်္ချိုင်းဂူအနားတွင် သွားရောက် ဆုတောင်းမေတ္တာများ ပြုလုပ်နေသည်ကို တွေ့ရှိတတ် ကြရသည်။ ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို ပျံလွန်တော်မူပြီး (၂)နှစ် အကြာ ၁၇၇၈ ခုနှစ်တွင် ပေတလုဒ်မိလဒ်သည်လည်း ကွယ်လွန်ခဲ့ရှာသည်။ မိမိ ကွယ်လွန်ပါက မိမိ၏ ကြွင်းကျန်သော ရုပ်ကလပ်ကို မိမိကြည်ညို ကိုးကွယ်သော ဆရာတော် ပယ်ရ်ကိုတို၏ သင်္ချိုင်းဂူအနီးတွင် သဂြိုလ်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သဖြင့် ပေတလုဒ်မိလဒ်အား ဆရာတော်အနီးတွင် မြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။ ပေတလုဒ်မိလဒ်၏ သင်္ချိုင်းဂူတွင် အောက်ပါ လက်တင်ဘာသာနှင့် မြန်မာစာတို့ဖြင့် ရေးသားထားသော ကျောက်စာကို ဖတ်ရူကြရသည်။
ပြင်သစ်အမျိုးသား ကုလားဗိုလ်ဘွဲ့ရ ပေတလုဒ် မိလဒ် သင်္ချိုင်းဂူ ကျောက်စာ
PETRUS MILLARD GA LLIAE
EX CAPTIVO BELLI REGIB US
A REGE CLLIAE CENTURIO
ELECTUS, MORITUR ANNO
ပရင်သစ်အမှု ပေတလူမီလတ်ပျင်သစ်ရှင် ဘုရာင်အမှုထဲသင် ဘောနှင့် လှည့်လည်သွားရမည် ခန့်ထား၍ လွင့်သွား သည်တွင် ဘိုးတော် အလောင်းမင်းတရားကြီးဘုရား ဟံသာဝတီကို သိမ်းရုံတော်မူသည် လွှတ်တော် ၁၁၁၇ နှစ် ရွှေစက်တော်မြတ်အောက်သို့ ရောံ၍ ဘိုးတော်အလောင်းမင်းတရားကြီး ဘုရား၊ ဘကြီးတော်ဘုရား၊ လက်ထက်တော် ဟံသာဝတီ၊ ယိုးဒယား ကသည်းမှစခု အရပ်ရပ်အမှုတော်ပေါ်ထွက်သမျှကို ထံရွက်ရသည်နှင့်ဘုရား၊ ခမည်းတော် ဆင်ဖြူရှင်ဘုရား၊ လွတ်တော်သက်တော်စောင့် ကုလားဘို အရာခန့်ထားတော်မူ၍ ရာဇာာရဘွဲ့အည်နှင့် တယ်မြို့ကို အသနားတော်မြတ်ခံရသည် ၄င်း နောက်ရာ ဇာသာရကျော်ထင်နှင့်၎င်းနောက် သီရိရာဇာသူရကျော်ထင်ဘွဲ့အမည်ကိုလည်း အသနားတော်မြတ်ခံရသည် ဘုရားရွှေလက် ထက်တော် သက်တော်စောင့်ကုလားဗို အရာထပ်၍ ခန့်ထားတော်မူသည် တဟ်မြို့နှင့် နေမျိုးသီရိရာဇူသရကျော်ထင်ဘွဲ့ အမည်ကိုလည်း အသနားတော်မြတ်ခံရသည်။ ကျေးဇူးတော်မြတ်ကို ဆက်ဆပ်ချင်လျှင် မရဏံ သေချင်းတည်းဟူသော အနိစ္စ ကံတရားနှင့် မကင်းမလွတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍ သက်ကရာဇ် ၁၀၉၇ ခုတပေါင်းလဆန်း ၁၀ရက် ၄နေ့သား အသက်၄၃နှစ် အ၀င်သက ရာဇ် ၁၁၄၀ ၀ါခေါင်လပြည့်ကျော် ၇ရက် ၆နေ့တွင် အနိစ္စကံ တရားနောက်သို့လိုက်သည်။
မှတ်ချက်။ ။အထက်ဖေါ်ပြပါကျောက်စာကို မူရင်းအတိုင်း အပုဒ်မခွဲပဲ ပြန်လည်ရေးသား ဖေါ်ပြထားပါသည်။ လက်တင် ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော ကျောက်စာကို အောက်ပါအတိုင်း မြန်မာပြန်ဆိုအပ်ပါသည်။
ယင်းသည် အသင်းတော်၏ သာသနာပြုများအတွက် ကျောင်းသင်္ကန်းကို
ပြင်သစ်ဘုရင်ခံတော်မှ "ဆာရ်ဘွဲ့ " ကိုခံယူရရှိပြီး
သက္ကရာဇ် ၁၇၇၈ခုနှစ်၊ အသက် ၄၂ နှစ်တွင်
မှတ်ချက်။ ။ လက်တင်ဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားထားသော ကျောက်စာသည် လက်ျာဘက်ပေါ်ပိုင်းတွင် အပိုင်း အစများ အနည်းငယ် ကျိုးပဲ့နေသည်။ ကျောက်စာအစွန်အဖျားရှိ မူရင်းစာလုံးများလည်း အကျိုးအပဲ့များတွင် ပါသွားသည် ။ သို့သော် လက်တင်ဘာသာစကားလုံးများကို ပြန်လည် ဖြည့်စွက်ပေးရန် အခက်အခဲမရှိပါ။ ပြန်လည်ဖြည့်စွက် စလုံးများကို မျဉ်းတား အစောင်းစာလုံးများဖြင့် ဖေါ်ပြထားသည်။
ဂေတားနိုမန်တေဂါးဇားသည် အီတလီပြည် မီလန်းမြိ့တွင် သက္ကရာဇ် ၁၇၄၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဂေတားနိုးသည် အသက် ၁၆ နှစ်ရောက်ရှိသောအခါ၊ ဘားရ်နဘိုက်အသင်းဂိုဏ်း သူတော်စင်ဘောင်သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ ရဟန်းတို့ သင်ကြားအပ်သော ပညာရပ်များကို ဆက်လက် ဆည်းပူးခဲ့ပြီး၊ ၁၇၆၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၈)ရက်နေ့ တွင် အသက် (၂၃)နှစ် အရွယ်၌ ရဟန်းသိက္ခခံယူခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး မန်တေဂါးဇား၏ ပညာ အရည်အချင်း ပြည့်စုံမှုရှိသောကြောင့် ၄င်းရဟန်းဖြစ် တက္ကသိုလ်ကြီးမှာပင် စာချပုဂ္ဂိ္ဂုလ် အဖြစ် ဆက်လက်ခန့်ထားခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ဂေတားနိုးမန်တေဂါးဇားသည် ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကပင် သာသနာပြု ပုဂ္ဂိ္ဂုလ်တပါးဖြစ်ချင်သည်။ တိုင်းတပါးသို့ သွားရောက် သာသနာပြုလိုသော ဆန္ဒမှာ စာချပုဂ္ဂိ္ဂုလ်အဖြစ် ထမ်းဆောင်နေရင်း တနေ့တခြား ပို၍ပင် တိုးပွား လာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်၌ မိမိတို့ ဘားရ်နားဘိုက်အသင်းဂိုဏ်းကြီးသည် သာသနာလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ ထမ်းဆောင်နေကြောင်း၊ တိုးချဲ့လုပ်ငန်းများ အတွက် သာသနာပြု ပုဂ္ဂိ္ဂုလ်များ အထူး လိုအပ်လျက် ရှိနေကြောင်း၊ အစရှိသောသတင်းများကို ကြားသိရသောအခါ မိမိအား သာသနာနယ်မြေသို့ စေလွှတ်ပေးးပါရန် အထက်အကြီးအကဲတို့အား လျှောက်ထားခဲ့သည်။
မှတ်ချက်။ ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို၏ ချစ်ခင်ရင်းနှီးသော တပြည့်သားရင်းတဦး ဖြစ်သည့် ဘုရင်ဂျီဘာသာဝင် ပေတလူ မိတင်ဆိုသော ကုလားဗိုလ်(ပြင်သစ်လူမျိုး)၏ သချိုင်္င်းကျောက်စာ အပါအ၀င် ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို "ကုန်းဘောင်ပြင်သစ်" နာမည်နဲ့ ဆရာရွှေစကြာက ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ကို အောက်ပါလင့်မှ တဆင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 8:28 PM
သက္ကရာဇ် ၁၇၇၃ -ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလပိုင်းတွင် ဆရာတော် ပယ်ရ်ကိုတိုသည် အောက်မြန်မာပြည်သို့ ခရီး ထွက်ခွါခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အပြစ်မဲ့ သန္ဓေ္ဓယူသောသခင်မ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး ကာရ်ပါးနီနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်၌ သာသနာရေး အခြေအနေများ ကောင်းမွန် တိုးတက်နေသဖြင့် လုပ်ငန်းသစ် စီမံကိန်းများ တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ရောမသာသနာဌာနချုပ်နှင့် ညှိနှိုင်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ဘို့ ဘုန်းတော်ကြီး ကာရ်ပါးနီကို အီတလီပြည်သို့ ခေတ္တ စေလွှတ်လိုကြောင်း တင်ပြဆွေး နွေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဆရာတော်ကိုင်တိုင် ရှေးယခင်က ရည်ရွယ်ချက်ရှိထားသော မြန်မာပုံနှိပ်လုပ်ငန်း ကိစ္စကိုလည်း အကောင်အထည်ဖေါ်ကြဘို့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ခဲ့သည်။ မြန်မာစာပေကို ပုံနှိပ်လောကသို့ ပို့ဆောင် ပေးနိုင်ခဲ့ပါက မြန်မာစာပေလောကသည် ပိုမို ကျယ်ပြန့်လာပြီး၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသား အားလုံးလိုလိုပင် အကျိုးခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော် မျှော်မှန်းခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ ရောမမြို့၊ုသာသနာ ပြန့်ပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး ဌာနချုပ်ကြီးမှ မြန်မာပုံနှိပ်လုပ်ငန်း ထမြောက် အောင်မြင်မှု ရရှိရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးဘို့ တောင်းခံရန် စီစဉ်များကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
ဆရာတော် ပယ်ရ်ကိုတို ကိုယ်တိုင် မြန်မာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုများကို ကွပ်ကဲကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို စီမံခန့်ခွဲသော မြန်မာပုံနှိပ်လုပ်ငန်း အပေါ် တည်းဖြတ်ကြပ်မတ်ပေးသူမှာ "ရတနာဂျွန်း" ဆိုသူဖြစ်သည်။ ဤပုဂိုလ် ဂျွန်းသည် ပညာအမြော်အမြင်နှင့် ပြည်စုံသဖြင့် ဘုရင့်လွတ်တော်အမတ်များ၏ ကြည်ညို လေးစားမှုကိုလည်း ခံစားရရှိသူဖြစ်သည်။ အမှုကိစ္စ အ၀၀တွင် အကြံဥာဏ်ပေး ပုဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ဂျွန်းသည် ရတနာရွာရှိ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့သဖြင့် "ရတနာဂျွန်း"ဟု အမည်တွင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ရတနာဂျွန်းသည် ဘုရားတရား ကြည်ညိုသူဖြစ်သည်။ မြန်မာစာပေ၊ ပါဠိစာပေများတွင် အလွန် ကျွမ်းကျင်သော ပုဂိုလ်လည်းဖြစ်သည်။ အထက်မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိလာကြသော ဘားရ်နားဘိုက် သာသနာပြုပုဂိုလ်များကိုလည်း မြန်မာစာ ချပေးခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို၏ တပြည့်ရင်းသားရင်း ဖြစ်သလို မြန်မာစာပေဖြင့် ပတ်သက်၍မှု ဆရာသမားလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
မြန်မာပုံနှိပ်လုပ်ငန်း စီမံဆောင်ရွက်ရာ၌ ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတိုသည် ရတနာဂျွန်း၏ အကူအညီကို များစွာရရှိခဲ့သည်။ ရတနာဂျွန်းသည် မြန်မာအက္ခရာစာလုံးများကို ပုံနှိပ်ခဲ စလုံး ပုံသွင်းမှု ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပုံတူ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းတွင် ဆရာတော် ပယ်ရ်ကိုတိုနှင့်အတူ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရသည်။ ပုံနှိပ်ခဲ စလုံးပုံတူများကို ပြန်လည် စီစစ် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ပေးရသည်။ မြန်မာ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း အောင်မြင်ပါက ပထမဆုံးရိုက်နှိပ်ရန် ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို စီစဉ် ရေးသားထားသည့် စာမှုကြမ်းများကို စီစစ် တည်းဖြတ်ပေးရသည်။
ဆရာတော်သည် မြန်မာပုံနှိပ်လုပ်ငန်း လွယ်ကူ ချောမွေ့စေရေးအတွက် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ အဘို့ မြန်မာစာဆိုင်ရာများကို ရှင်းလင်းချက်များ ထုတ်လုပ် ရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်။ ရတနာဂျွန်းကလည်း မိမိကိုယ်တိုင် သပ္ပာယ်လှပစွာ စီကုံးရေးသားထားသော ပေသ၀ဏ်လွှာစာစောင် တစောင်ကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဆဌမမြောက်ပီဦး (Pope Pius VI)ထံသို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။ ယင်း ပေသ၀ဏ်လွှာသည် မြန်မာပြည်မှ ရောမမြို့သို့ ရှေးဦးဆုံး ရောက်ရှိသွားသော ပေစာဖြစ်သည်။ ပေသ၀ဏ်လွှာ၌ မိမိအား ဘုရားကားချပ်များ ရုပ်ပုံတော်များ ပေးပို့ရန်နှင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ တောင်းခံလျှက်၊ ဆုမွန်ကောင်းများ တောင်းချွေပေးပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံရေးသားထားသည်။
သက္ကရာဇ် ၁၇၇၄ ခုနှစ်၊ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ဘုန်းတော်ကြီး ကာရ်ပါးနီသည် အီတလီသို့ ခရီး စတင် ထွက်ခွာခဲ့သည်။ သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဆဌမမြောက်ပီဦးအား ၀င်ရောက် တွေ့ဆုံဖူးမြင်ခဲ့သည်။ ဆရာတော် ပယ်ရ်ကိုတို၏ တောင်းဆိုချက်များကို တင်ပြခဲ့သည်။ ရတနာဂျွန်း ဆက်သလိုက်သော ပေသ၀ဏ်လွာကိုလည်း ရဟန်းမင်းကြီးအား ဆက်သခဲ့သည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကလည်း မြန်မာပြည်မှ တင်ပြလာသော သာသနာရေးကိစ္စများနှင့် ရတနာဂျွန်း ဆက်သသော ပေသ၀ဏ်လွှာကို ၀မ်းသာအားရစွာဖြင့် လက်ခံယူခဲ့သည်။ ရတနာဂျွန်း၏ မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ ရတနာဂျွန်းအတွက် အထူးပန်းချီကားချပ် တချပ်ကို ရေးဆွဲစေခဲ့သည်။ ဘားရ်နားဘိုက် သာသနာပြု (၂)ပါးသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတစ်စုကို လက်တွဲခေါ်လျက် ခရစ်တော်၏ ရုပ်ပုံတော်ရှေ့တွင် ရပ်လျက်နေကြသည့် ပန်းချီပုံကို သရုပ်ဖေါ် ရေးဆွဲထားသည်။
သာသနာ ပြန့်ပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ်အား မြန်မာ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖေါ်၍ အပြီး ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးမှ ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး ကာရ်ပါးနီသည်လည်း ယင်းဌာနချုပ်ကြီး၏ အတွင်းရေးမှုးချုပ် မွန်ဆီညော် စတေဖားနူး ဘောရ်ဂျီးယား (Stephanus Borgia) အား ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို၏ မြန်မာပုံနှိပ်လုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာများကို တင်ပြခဲ့သည်။ အတွင်းရေးမှုးချုပ်မှ ၀မ်းသာအားရ ကြိုဆိုလက်ခံလျက် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သာသနာပြန့်ပွားရေးဌာနချုပ်မှ ဖွင့်လှစ်ထားသော "ပိုလီဂလော့ပုံနှိပ်တိုက်" တာဝန်ခံမှုး ခရစ္စတိုဖား အာမာဒုဇီဦးစ်(Christopher Amaduzius) အား လွဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။ အတွင်းရေးမှုးချုပ် စတေဖာနူး ဘောရ်ဂျီယား (Stephanus Borgia) သည် အရှေ့ဖျား တိုင်းပြည်များနှင့် အာဖရိကတိုက်၊ ဥရောပတိုက်၊ အစရှိသော တိုက်ကြီးများ၏ တိုင်းပြည်များတွင် အသုံးပြုသော ဘာသာစကား စာပေတို့ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသော တာဝန်ခံမှုးလည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာပုံနှိပ်လုပ်ငန်း တီထွင်ဘို့ရန် ယခုအကြိမ်သည် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ခဲ့သည့်အလျောက် စတေဖါနှုး ဘောရ် ဂျီးယား၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုသည် များစွာ ရေးပါရှိခဲ့သည်။
မြန်မာဗျည်း အက္ခရာစာလုံးများကို ပုံနှိပ် ခဲစလုံးများအဖြစ် ပုံသွင်းလုပ်ငန်းသည် အထူးပင် ခက်ခဲသော လုပ်ငန်းတခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဦးစွာပထမ ဤုသို့သော ၀ိုင်းစက်စက် ရေးထားသည့် မြန်မာဗျည်းအက္ခရာ စာလုံးမျိုးများကို ခဲစလုံးပုံသွင်း လုပ်သားတို့အနေဖြင့် မမြင်ဘူးခဲ့ကြပေ။ ဆရာတော် ပယ်ရ်ကိုတို အနေဖြင့် အနီးစပ်ဆုံး ပြင်ဆင် ရေးဆွဲပေးလိုက်သော်လည်း လက်တွေ့ လုပ်ငန်းရပ်တွင်မှု အခက်အခဲများ သက်ဝင်လာခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဘုန်းတော်ကြီး ကာရ်ပါးနီသည် အနီးကပ် ပြန်လည် မွမ်းမံ ဖြေရှင်းလုပ်ဆောင်ပေးရသည်။ တကယ့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းများ အားလုံးကို ဘုန်းတော်ကြီး ကာရ်ပါးနီမှ အကျိုးဆောင် ပေးခဲ့ရသဖြင့် ကာရ်ပါးနီသည် မြန်မာပုံနှိပ်လုပ်ငန်း အောင်မြင်မှု အခမ်းကဏ္ဍတွင် အရေးပါသည့် ပုဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်သည်။
မြန်မာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသည် သက္ကရာဇ် ၁၇၇၆ ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်ခြင်း ပန်းကို ဆွတ်ခူးခဲ့လေပြီ။
ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း တီထွင် အောင်မြင်မှု အောင်မြင်သည်နှင့် အမျှ ပထမဆုံး ပုံနှိပ် မြန်မာစာအုပ်ကိုလည်း တချိန်တည်းမှာပင် ရိုက်နှိပ်ခဲ့သည်။ မြန်မာစာအုပ်လောက၌ ပထမဆုံး ထွက်ပေါ်လာခဲ့သော စာအုပ်အကြောင်းကို အောက်တွင် ဆက်လက်၍ အကျဉ်းမျှတင်ပြလိုသည်။
စတေဖာနူး ဘော်ရ်ဂျီးယား၏ နိဒါန်း
ခရစ္စတိုဖား အာမာဒုဇီဦးစ်၏ အမှာစာ
ဂျေ၊ အိတ်က်စ်ပီလီ၏ အမှာစာ
ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို၏ မြန်မာ ဗျည်းအက္ခရာများအကြောင်း၊ မြန်မာသတ်ပုံ သတ်ညွန်းအကြောင်း
မြန်မာသဒ္ဒါအကြောင်းများ ရှင်းလင်း ရေးသားထားသည်။
ကက်သလိခ်ဘာသာဝင်တို့ နေ့စဉ် အသုံးပြုသော ဆုတောင်းပဌာနာများ။
အထက်ပါ မာတိကာတို့အောက်တွင် ဆက်လက်၍ အကျဉ်းဆက်လက်ဖေါ်ပြသွားလိုသည်။
၁။ စာအုပ်အမည်ဖြစ်သော ALPHABETUM BARMANUM ဆိုသည်မှာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားအားဖြင့် BURMESE ALPHABET ဟူ ဘာသာပြန်နိုင်ပြီး၊ မြန်မာမှု ပြန်ဆိုရလျှင် "မြန်မာအက္ခရာသင်ပုံးကြီး အညွှန်း"ဟု ဆိုလိုသည်။
၂။ စတေဖားနှုး ဘောရ်ဂျီးယား ရေးသားသော နိဒါန်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖတ်ရှုရသည်။
သာသနာတော်နှင့် ဘာသာအယူဝါဒ တရားတော်မြတ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရတော်မူသော အသင်းတော်ကြီး၏ နာယက ဦးစီးမှူးဖြစ်တော်မှုသည့် အလွန်မြင့်မြတ် ရိုသေထိုက်လှသော ဆဌမမြောက် ရဟန်းမင်းကြီး ပီဦးအား လက်အုပ်ချီမိုး ပူဇော်ကန်တော့ပါ၏ ဘုရား။
အင်းဝနေပြည်တော်၌ အသုံးပြုသည့် ဗမာ (၀ါ) ဗိုမားခေါ် နိုင်ငံတော်သုံး ဗျည်းအက္ခရာစာလုံးများကို ပထမအကြိမ်အဖြစ် သာသနာပြန့်ပွားရေးနှင့် စီမံ ခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ်ကြီး၏ ပုံနှိပ်တိုက်မှ ဦးဆောင် အကျိုးပြုလျက် တိကျမှန်ကန်စွာ တီထွင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် ပေးလိုက်သည်။ ယင်း၏ ဘာသာစကားဖြင့် အရေးအသားတို့ကို အသုံးပြုပြီး၊ ဂင်္ဂါ မြစ်ဝှမ်း တဖက်ကမ်းရှိ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားတို့အား၊ သံပေါလူး၏ တမန်တော်အသင်းသည် တိုင်းတပါးတို့အား ဟောပြော သွန်သင်ရာ၌ အချုပ်အာဏာတော်နှင့် ဦးဆောင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်သော ရဟန်းမင်း၏ ဆန္ဒကို အစဉ်ခံယူလျက် ကက်သလိခ်ဘာသာ အယူဝါဒကို ဟောကြား သွန်သင်ကြသည်။
စာအုပ်၏ တတိယပိုင်းတွင် ပိုလီဂလော့ပုံနှိပ်တိုက်လုပ်ငန်း ဥက္ကဌဖြစ်သူ ခရစ္စတိုဖား အာမာဒုဇီဦးစ်၏ အမှာစာကို ဖတ်ရှုကြရသည်။ စာမျက်နှာ (၇) မှ (၁၆) အထိ ရေးသားထားသော အမှာစာ ဖြစ်သည်။ အမှာစာတွင် ဖတ်ရှုရသည်မှာ သာသနာ ပြန့်ပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး ဌာနချုပ်ကြီးသည် အိန္ဒိယနွယ်ဝင် ဘာသာစကားများ ဖြစ်ကြသော တီဗက်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူစတန်ဘာသာ၊ သက္ကတ္တဘာသာစကားများကို လေ့လာပြီးနောက် မိမိဌာနချုပ်သည် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ၌ ရင့်ကျက် ကျွမ်းကျင်နေပြီးဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါ ဘာသာစကားသုံး စာပေများကို ထမြောက် အောင်မြင်စွာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့သည် ဖြစ်သည်။
ယခုအကြိမ်၌ မြန်မာဘာသာ စကားသုံး စာပေကိုလည်း ဘားရ်နားဘိုက်အသင်းဂိုဏ်းသား ဘုန်းတော်ကြီး မယ်လ်ခီအော ကာရ်ပါးနီမှ အထူး သင့်မြတ်သော အချိန်အခါတွင် ရောက်ရှိလာပြီး တင်ပြလာပါသည်။ ယင်းစာပေကို အောင်မြင်စွာ ပုံနှိပ် ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသဖြင့် ၀မ်းမြောက် ဂုဏ်ယူမိကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာဗျည်း အက္ခရာများအကြောင်းကို ရှင်းလင်း ထုတ်ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ထိုနောက် ဤဗျည်းအက္ခရာများကို ပထမအကြိမ် အဖြစ် တီထွင် ထုတ်လုပ်ပေးရာတွင် မည်သို့ ရေးသား မှတ်သားရကြောင်း မည်သို့ မိတ္တူကူး၍ မည်သို့ ပုံသွင်းရကြောင်းများကို ဖေါ်ပြသည်။ တဖန် "မြန်မာ ဗျည်းအက္ခရာ သင်ပုံးကြီး အညွှန်း" နှင့် ကက်သလိခ် ယုံကြည်ရာများ ဖြစ်သော ဘုရားစကား စာအုပ်ပါဝင်သည့် ပထမဆုံး မြန်မာ ပုံနှိပ်စာအုပ်ကိုလည်း ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေလိုက်ကြောင်း မှတ်တမ်း တင်ခဲ့လေသည်။
လန်ဒန်မြို့ မှ ဘုရင့် သိပ္ပံပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း၏ အတွင်းရေးမှုးချားလ်စ် မော်သွန် သည်၊ သက္ကရာဇ် ၁၇၅၉ ခုနှစ်တွင် သုတေသနပြု လုပ် ၍ စုဆောင်းရရှိခဲ့သော ကြေးနီအက္ခရာ (၂၇)လုံး တွင် မြန်မာဗျည်းအက္ခရာ စလုံးများ မပါရှိသေးကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်။ သက္ကရာဇ် ၁၇၄၈ ခုနှစ်ကလည်း သုတေသန ပညာရှင်များ ဖြစ်ကြသော ဖရက်ဒ် ဖရီဇီအုစ် နှင့် ဘင်ဂျာမီနုစ် စကူဇီအုစ် တို့ စုဆောင်း တွေ့ရှိရသည့် "ကောင်းကင်ဘုံ မေတ္တာ"ကို ဘာသာစကား (၂၀၀) ပေါင်းချုပ်ဖြင့် ရေးသားထားသည့် အုပ်စုတွင် မြန်မာဘာသာ စကား မပါရှိသေးကြောင်းကိုပါ တင်ပြ ဆွေးနွေးထားသည်။ ၄င်းပြင် မြန်မာဘာသာစကားသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား အများစု အသုံးပြု ရေးသား ပြောဆိုသော ဘာသာစကားရပ် ဖြစ်ကြောင်း ၊ မြန်မာပြည်ဆိုသည်မှာလည်း ရှေးယခင်က သမိုင်းသုတေသီ ပညာရှင်များ ခေါ်ဝေါ်ကြသည့် အမည်မှာ မှားယွင်းနေကြောင်းများကို တင်ပြခဲ့သည်။
စာအုပ်၏ စတုတ္ထပိုင်းတွင် စာမျက်နှာ (၁၇) မှ (၄၄) ထိဖြစ်ပြီး ဘုန်းတော်ကြီး ကာရ်ပါးနီ၏ နိဒါန်းကို ဖတ်ရှုရသည်။
ဘုန်းတော်ကြီး ကာရ်ပါးနီသည် အောက်ပါ အကြောင်းအရပ် (၃)ခု အကြောင်းကို အဓိကထား ရေးသား ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
(က) မြန်မာတို့၏ သမိုင်းဦး အကြောင်း
(ခ) မြန်မာတို့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း
(ဂ) မြန်မာသဒ္ဒါ အကြောင်း
၁။ မြန်မာသမိုင်းဦး။ ။ မြန်မာလူမျိုးများ ဆင်းသက်လာသည့် အကြောင်းနှင့် ရှေးဦး သမိုင်းအကြောင်းကို ရေးသားထားသည့် မြန်မာ့သမိုင်းအကြောင်းတွင် အင်းဝ ဘုရင်မင်းမြတ်အကြောင်းကို အရင်းခံထား၍ ဖေါ်ပြထားသည်။
၂။ မြန်မာ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု။ မြန်မာလူမျိုးတို၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ အကြောင်း ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း မြန်မာလူမျိုးတို့ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာအကြောင်းတို့ ပါရှိသည်။
၃။ မြန်မာသဒ္ဒါ။ ။ မြန်မာသဒ္ဒါနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံ သဘောတရားများအကြောင်း၊ မြန်မာ စကား အသုံး အနှုန်းများနှင့် မြန်မာစာနှင့် ဒွန်တွဲလျက်ရှိသော ပါဠိစာပေအကြောင်းကို အကျယ်တ၀ံ့ ရေးသား တင်ပြထားသည်။
စာအုပ်၏ ပဉ္စမအပိုင်းတွင် ပုံနှိပ်ခဲစလုံးများ ထုတ်လုပ်ရေး တာဝန်ခံ ဂျေ၊ အိတ်က်စ်ပီလီ၏ အမှာစာဖြစ်သည်။ မြန်မာပုံနှိပ် ခဲစလုံးများကို တီထွင်ပေးရာ၌ မြန်မာစာလုံး အတွက် အ၀ိုင်းပုံစံများကို တီထွင်ပေးပြီး။ ပါဠိ စာလုံးများအတွက်မှု လေးဒေါင့် ပုံစံများကို တီထွင် ထုတ်လုပ်လိုက်သည့် အကြောင်းများကို ရှင်းလင်း ဖေါ်ပြထားသည်။ ၄င်းအပြင် အင်းဝနေပြည်တော်တွင် အသုံးပြုသော ငွေကြေးပုံစံနှင့် နိုင်ငံတော်တံဆိပ်တုံးကို၎င်း၊ ပဲခူးမြို့တော်တွင် အသုံးပြုသော ငွေကြေးပုံစံနှင့် တံဆိပ်တုံးကို၎င်း၊ အသီးသီး ပုံသွင်း ရိုက်နှိပ်ပြခဲ့သည်။ ပါဠိ ပုံနှိပ် နမှုနာကို ပြလိုသဖြင့် ကမ္မ၀ါ ကျမ်းပုဒ်တပုဒ်ကို ရိုက်နှိပ်ပြထားသည်။ မြန်မာပုံနှိပ် ခဲစလုံးများကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ပုံသွင်းပေးလိုက်သည့် အရေအတွက်မှာ စုစုပေါင်း ၇၀၀၀၀ (ခုနှစ်သောင်း) ခန့် ရှိသည်။
စာအုပ်၏ ဆဌမပိုင်းတွင်မူ ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို၏ ရှင်းလင်းချက်များကို တွေ့ရှိရသည်။ မြန်မာ ဗျည်း အက္ခရာ (၃၃)လုံး ရှိကြောင်းနှင့် မြန်မာ "သရ"တို့ အကြောင်းကို ရှင်းလင်း ရေးသား တင်ပြထားသည်။ ဥပမာ ဗျည်း နှင့် သရ တို့ ပူးတွဲ အသုံးပြုပုံ၊ မြန်မာ အသံထွက်ပုံတို့ကို အကျယ်တ၀ံ့ (က မှ အ) အထိ ရေးသား ဖေါ်ပြထားသည်။ ထို့နောက် သင်ပုန်းကြီးကို စတင် ရှင်းလင်း ဖေါ်ပြရာ၌ မြန်မာသတ်ပုံ အညွှန်းများအကြောင်း မြန်မာသဒ္ဒါ အကြောင်းတို့ကို တင်ပြ ရေးသားသွားခဲ့သည်။
စာအုပ်၏ ပထမပိုင်းလည်းဖြစ်၊ နောက်ဆုံးအပိုင်းလည်း ဖြစ်သောနေရာတွင်၊ ကက်သလိခ် ဘာသာဝင်တို့ နေ့စဉ် ရွတ်ဆိုသော ဆုတောင်း ပဌနာတော်များကို ရိုက်နှိပ်ထားသည်။ ၄င်းတို့မှာ-
၃။ အားလုံးစုံကို မေတ္တာ
၄။ သနားခြင်း၏ မယ်တော်မေတ္တာ
၅။ ပညတ်တော် (၁၀)ပါးတို့ပါဝင်ကြသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 4:56 AM
ခရီးအရှိန် မဆုံးသေးတဲ့ မီးအိမ်လေးတစ်လုံး (အပိုင်း ၃)
ခရီးအရှိန် မဆုံးသေးတဲ့ မီးအိမ်လေးတစ်လုံး (အပိုင်း ၂)
အမှောင်ထဲက လူသားများအား အလင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။
ဆရာတင်မိုး၏ ဖန်မီးအိမ် ကဗျာမှ အောက်ပါအပိုဒ်ကို ရွေးထုတ် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်။
ထိုနေ့က အဖဆရာတော်ကြီး ပေါလ်သည် မြစ်ကြီးနား စိန်ပက်ထရိတ် ကာသီဒြယ်ဘုရားကျောင်းထဲ၌ အာပတ်ဖြေ နေချိန်ဖြစ်သည်။ ညနေ (၅း၀၀) နာရီခန့် ဖြစ်မည် ထင်သည်။ ရဟန်းတော်တစ်ပါး အာပတ်ဖြေရာသို့ ရိုကျိုးစွာ ချဉ်းကပ်လာသည်။ ထူးတော့ ထူးတော့မည်ဟု ရိပ်မိလိုက်သည်။ ဘာများ ထူးမည်နည်း၊ "ဆရာတော်ဘုရား အရေးကြီးတဲ့ ဖုန်းခေါ်မှုတစ်ခု ရောက်နေပါသည်။ အမြန်ဆုံး လာရောက် ဆက်သွယ်ပါလို့ မှာထားပါကြောင်း ပြောလာသည်။ သွားရကောင်း မကောင်း ချီတုံချတုန်နှင့် မိမိဘာလုပ်ရမည်နည်း၊ ဘာလုပ်သင့် သနည်း။
တကယ်တော့ ဆရာတော်ကြီး ၀ါသနာ အပါဆုံး အလုပ်နှစ်မျိုးရှိသည် ဘာသာတူများထံ သွားရောက် လည်ပတ်ခြင်းနှင့် အာပတ်ဖြေ နားထောင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဆရာတော်ကြီးသည် (၁၉၇၆) ခုနှစ် ဆရာတော် သိက္ခာတင်ပြီး နောက်ပိုင်း နယ်လှည့်ခြင်းကို ပထမ ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မိမိ၏ သိုးများထံ မရောက်အရောက် သွားနိုင်ခဲ့သည်။ မည်သူသည် ဆရာတော်ကြီးလောက် နယ်လှည့်ခဲ့ပါသနည်း။
အမှန်ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် မြစ်ကြီးနားမှ ပူတာအိုသို့ ခြေလျင်ခရီး နှင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ ဘာသာတူ ရွာများသို့ တစ်ရွာဝင် တစ်ရွာထွက်ဖြင့် တစ်လ ကိုးသီတင်းကြာလည်း သူက မမှုခဲ့ပါ။ ဆရာတော်၏ အဓိက ပစ်မှတ်က ဘာသာတူ သိုးများကို တွေ့လိုခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ မည်မျှပင် ချောင်ကျသည့်ရွာ ဖြစ်နေပါစေ၊ ဆရာတော်ကို မတွေ့ဖူး မမြင်ဖူးသူ မရှိခဲ့ပါ။ ထို့အတူ ဆရာတော် မရောက်ခဲ့သည့် နေရာဟူ၍လည်း မရှိခဲ့ပါ။ ခရီးထွက်ရန် ၀န်လေးနေသူ မဟုတ်- အမြဲ ပေါ့ပါး လန်းဆန်းနေ၏။
နောက်တစ်ခုကတော့ အာပတ်ဖြေနားထောင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ပေါလ်၏ အာပတ်ဖြေခြင်းနှင့် ပတ်သက် မိန့်ချက်က ဒို့ရဟန်းတော်တွေရဲ့ အဓိက တာဝန်သည်၊ သိုးများ၏ ၀ိညာဉ်ရေး ဖြူစင်မှုပင် ဖြစ်သည်။ သင် ရဟန်းဘ၀ ခံယူခဲ့သော်လည်း အာပတ်ဖြေရန် ၀န်လေးနေပါက ကား ဒရိုက်ဘာက ကားမမောင်းသလိုမျိုးပင် ဖြစ်ပေမည်။ ထို့ကြောင့်လည်း မည်သည့်နေရာ ဒေသသို့ ရောက်သည့်တိုင် ဆရာတော်ကြီးသည် အာပတ်ဖြေ နားထောင်ရန် ၀န်မလေးသကဲ့သို့၊ မိမိ၏ ၀ိညာဉ်ရေးအတွက်လည်း အမြဲ အာပတ်ဖြေလေ့ရှိသည်ဟု လေ့လာသိရှိရသည်။
ဆရာတော်သည် အာပတ်ဖြေ နားထောင်နေရာမှထကာ တယ်လီဖုန်းရှိရာသို့ ခြေလှမ်းလိုက်သည်။ ထိုအချိန်က လူတိုင်း တယ်လီဖုန်းကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် မသုံးနိုင်သေးချေ၊
"ဟဲလို-- ကျွန်ုပ် ဆရာတော်ပေါလ်ပါ။ အမိန့်ရှိပါ"
"ဟုတ်ကဲ့... ရဟန်းမင်း ကိုယ်စားလှယ် စကားပြောနေပါတယ်၊"
ဆရာတော်ပေါလ် ဘာဆက်ပြောရ- ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့မိပါသည်။
"တစ်ချိန်က ဆရာတော် မိန့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခြား တစ်နေရာရာကို
ပြောင်းမိန့်ပေးရင် ကြည်ကြည်သာသာနှင့် ပြောင်းပေးမယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ပြန် သတိရပါသလား၊- ဆရာတော့်ကို မန္တလေး ဆရာတော် အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ပေးလိုပါတယ်-လက်ခံနိုင်မလား"တဲ့။
ကက်သလစ် သာသနာတော်၌ အသစ်တက်လာသော ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးများ၏ အဦးဆုံး မိန့်ခွန်းကို ကမ္ဘာကြီးက နားစွန့်သည်၊ စိတ်ဝင်စားကြသည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဒုတိယမြောက် ယောဟန်ပေါလူးက သူ့ရဲ့ ဗွေဆော် ဦးမိန့်ခွန်းတွင် မကြောက်ကြနှင့် ( Don't be afraid)ဟု မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ လက်ရှိ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်ကတော့ ငါ့အတွက် ဆုတောင်းပေးပါ (Please pray for me)လို့ ဆုတောင်းခိုင်းပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီး ပေါလ်ကလည်း မန္တလေးသာသနာသို့ ရောက်သည့် နေ့က မန္တလေးသာသနာမှ ရဟန်းတော်များအား မိန့်ခွန်း ချွေခဲ့သည်မှာ "သင်တို့က င့ါကို အစေခံရန် လာခြင်း မဟုတ်၊ ငါကသာ သင်တို့ကို အစေခံရန် လာခြင်းဖြစ်သည်"ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။
ဆရာတော်ကြီးသည် မိမိအပြောနှင့် အလုပ်ကို ကိုက်ညီအောင် ပြုမူ နေထိုင် ကျင့်ကြံသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူ့အား ဦးစားပေးမှုကို မလိုလားသူ၊ ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်သူ ဖြစ်သည်။
ဖန်မီးအိမ်လေး တစ်နေ့တော့ လေပြင်းမုန်တိုင်း မိခဲ့ဖူးသည်၊ မီးတောင်လေးလဲ ယဲ့ယဲ့သာ ကျန်တော့သည်။ နှလုံးသွေး ကြောပိတ် ရောဂါတဲ့၊ ဆရာတော်ကြီးသည် မန္တလေး အပူကို မကြုံဖူးတော့ အနေရ အထိုင်ရ ခက်ခဲ နေမည်သာဖြစ်သည်။ အဲယားကွန်းဆိုသည့် အအေးပေးစက်ကို မသုံးသောကြောင့် ပူအိုက်သည့် ဒါဏ်ကို အလူးအလဲ ခံခဲ့ရသည်။ (Heat Stoke) ခေါ် အပူဒါဏ် ခံခဲ့ရသည်။
(၂၀၁၀) ခုနှစ် မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၌ သွေးကြော ပိတ်ခြင်းကို ခွဲစိပ်မှု ခံယူခဲ့သည်။ ထိုစဉ်ဆရာတော်နှင့် ပတ်သက်သော (Beloved of Christ)၏ အယ်ဒီတာ ဖာသာထွန်းမြင့်၏ စကားဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။
လေးစား ချစ်ခင်ရပါသော စာဖတ်ပရိသတ်များ ခင်ဗျာ။
လောကမှာ လူတစ်ယောက်၏ တန်ဖိုး၊ တစ်စုံတစ်ခု၏ တန်ဖိုး၊ အတွေး အမြင်တစ်ခု၏ တန်ဖိုး-ရပ်တည်မှု တစ်ခု၏ တန်ဖိုးဟူသည်။ ထိုအရာ၏ အရာရောက်မှု၊ အသုံးဝင်မှုထက်၊ ၎င်းမရှိတော့မှ တမ်းတမှု၊ လွမ်းစွတ်မှု၊ အပေါ်မှာပိုပြီး မူတည်ပါသည်။(အားလစ်မေရီဟီလ်တန်)။
ယခုလည်း သည်အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာတော်ကြီး ပေါလ် မိမိ၏ ကျန်းမာရေးကြောင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေသည်ဟု ကြားတော့ စိတ်ပူမိသည်။ စိတ်လည်း မချမ်းသာမိပါ။
အကြောင်းကတော့ (၁) မန္တလေး ဆရာတော်ကြီး ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ (၂) ဒုတိယအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စာစောင် အရှိန်ရနေခြင်းက ဆရာတော်ကြီး၏ အဖွင့်အမှာစကားများက များစွာမှ တွန်းအား သက်ရောက် လှပါသည်။ ယခုတော့ ပိုမို သိသာလှပါသည်။ ဆရာတော်ကြီး၏ နေရာ ကွက်လပ်သည် အစားထိုး၍ မရသော နေရာတစ်ခု ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အခါတိုင်း ပုံမှန် စာမူရနေစဉ်ကတော့ မသိသာလှချေ၊ ဆရာတော်ထံမှ စာမူ- မရနိုင်ဟု အသိက ကျွန်တော့်ကို အတော် ချိန်းခြောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဆရာတော်ကြီးသည် အပြောနှင့်အလုပ် ညီညွတ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ မိမိက အစေခံအမှုကို ပြုတတ်သူ၊ မိမိက အစပြု ကူညီ ရိုင်းပင်းတတ်သူ၊ မိတ်ကောင်းဆွေမွန်တစ်ဦး၊ ယုံကြည် စိတ်အချရဆုံး ဘ၀ခရီး သွားဖေါ်တစ်ဦး၊ ဦးဆောင်မှု အပေးနိုင်ဆုံး ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
သိုးထိန်းကောင်း ပီသသော ဆရာတော်ကြီး အမြန်ဆုံး ကျန်းမာ လာပါစေ၊ သာသနာ့ အမှုတော်ကိုလည်း အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ထမ်းဆောင် နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါသည်။
ဘုရားရှင်တော်မြတ် ကောင်းကြီး ပေးတော်မူပါစေ၊
ဘုန်းတော်ကြီး ဂေဗြီအယ် ဦးထွန်းမြင့် (R.V.A)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 6:55 AM